Home » Akụkọ Njem njem Hawaii » Ebe ezumike ezumike Hawaii na-anọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 20% dị elu karịa ebe obibi na họtel na March
Ebe ezumike ezumike Hawaii na-anọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 20% dị elu karịa ebe obibi na họtel na March
N’ọnwa Machị, ihe ka ọtụtụ n’ime ndị njem rutere Hawaii na-esite na steeti na steeti na-agagharị na steeti ga-agafe iwu ịkwụpụ iche onwe onye nke Steeti ụbọchị iri.
Ezumike ezumike kwa ọnwa kwa ọnwa bụ pasent 62.3
Rentlọ ezumike ezumike agaghị adịchasị na gburugburu ma ọ bụ ụbọchị ọ bụla nke ọnwa
Ulo ezumike ezumike na-anabatakarị ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ọbịa karịa ụlọ nkwari akụ ọdịnala
Na Machị 2021, ngụkọta kwa ọnwa nke mgbazinye ezumike nke steeti niile bụ abalị 587,300 (-32.6%) yana mkpa ọnwa bụ 365,700 nkeji abalị (-34.4%). Nke a rụpụtara na nkeji nkeji nke ọnwa 62.3 (-1.7 pasent isi) maka Machị, nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ pasent 20 dị elu karịa ebe obibi nke ụlọ nkwari akụ Hawaii (43.1%).
Onu ogugu kwa ubochi (ADR) maka ezumike ulo ezumike na steeti na March bu $ 248 (+ 3.6%), nke na-erughị ADR maka hotels ($ 285). Ọ dị mkpa iburu n'uche na n'adịghị ka ụlọ nkwari akụ, ụlọ oriri na ọ condụominụ ndị ọzọ, ebe ezumike oge ezumike na ezumike mgbazinye ezumike anaghị adịcha kwa afọ ma ọ bụ ụbọchị nke ọ bụla n'ọnwa ma na-anabatakwa ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ọbịa karịa ụlọ nkwari akụ ọdịnala.
Na Machị, ọtụtụ ndị njem na-esite na steeti na-ejegharị ma na-agagharị na mpaghara ga-agabiga nnọchibido onwe nke ụbọchị 10 nke steeti yana ezigbo ihe nyocha nke COVID-19 NAAT sitere na Onye Mmekọ Ule Tụkwasịrị Obi site na mmemme nchekwa njem nke steeti. Ndị njem trans-Pacific niile na-esonye na mmemme nnwale tupu njem a chọrọ ka ha nwee nsonaazụ nnwale na-adịghị mma tupu ha apụ na Hawaii. Kauai County nọgidere na-akwụsịtụ nwa oge na nsonye ya na mmemme njem nchekwa nke steeti, na-eme ka ọ dị mkpa maka ndị njem trans-Pacific niile na Kauai ka ha kpọpụ iche mgbe ha rutere ma e wezụga ndị na-esonye na mmemme nnwale tupu na njem na "ebe a na-eme njem" ihe onwunwe dika uzo iji belata oge ha. Obodo nke Hawaii, Maui na Kalawao (Molokai) nwekwara ndi iche iche iche na ebe onwa March.
Na Machị, enyere ohere mgbazinye oge dị mkpirikpi ka ha rụọ ọrụ na Maui County na Oahu, Hawaii Island na Kauai ma ọ bụrụhaala na a naghị eji ha dị ka ebe iche.
The Hawaii Tourism Authority (HTA) Ngalaba Nnyocha Njem Nleta nyere nchọpụta nke akụkọ ahụ na-etinye data nke Transparent Intelligence chịkọtara, Inc. Ihe data dị na akụkọ a na-ewepu nkeji akọwapụtara na HTA's Hawaii Hotel Performance Report na Hawaii Timeshare Quarterly Survey Report. N’akuko a, akowara mgbazinye ezumike dika ijiri ulo mgbazinye, ulo ime ulo, ulo ime-ulo na ulo ndi mmadu, ma obu imekorita ulo / oghere n’ime ulo nke onwe. Akụkọ a anaghị ekpebi ma ọ bụ ọdịiche dị n'etiti nkeji nke enyere ma ọ bụ ekweghị. The "iwu" nke ọ bụla nyere ezumike mgbazinye unit kpebisiri ike na a asị asị.